Griezmann Oo Aaminsan Inuu Xulkiisa France Ku Guuleysan Karo Euro 2016 Isla Markaana Sababaha Sharraxay | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Griezmann Oo Aaminsan Inuu Xulkiisa France Ku Guuleysan Karo Euro 2016 Isla Markaana Sababaha Sharraxay
Griezmann Oo Aaminsan Inuu Xulkiisa France Ku Guuleysan Karo Euro 2016 Isla Markaana Sababaha Sharraxay
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 6-06-16 10:45 AM Antoine GriezmannAntoine Griezmann ayaa kalsooni ku qaba inuu xulka France leeyahay awood uu kula guuleysan karo koobka Euro 2016 oo lagu dhigi doono ciiddooda, laakiin wuxuu sheegay inay u baahan doonaan inuu nasiibku caawiyo si ay markoodii seddaxaad taariikhda u qaadaan tartankaan.
Gooldhaliyaha Atletico Madrid ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono xiddiga furaha u ah xulka tababare Didier Deschamps xagaagaan wuxuuna xasilooni ka muujiyey natiijada ay isaga iyo asxaabtiisu kasoo hoyn karaan tartankaan.
“Waxaan heysanaa ciyaartooy waa weyn kuwaasoo u ciyaara kooxo waa weyn, sidaas darteed waxaan u maleynayaa inaan heysano ciyaartooy koobkaan aan ku qaadi karno,” ayuu u sheegay shabakadda Goal.com. “Laakiin waa inaan awood muujinaa, haddii aan guuleysano seddaxdeena kulan ee ugu horreeya markaas waan arki doonaa wixii aan sameyn karno.
“Taageereyaal cajiib ah ayaan heysanaa sidoo kale group-ka aan ku jirno waa mid wanaagsan. Marka aad timaado qolka lebiska farxad ayaa ka jirta saaxiibo ayaana nahay dhammaanteen. Sidaas darteed waxaan rajeynayaa inaan boqolkiiba 100 isku caawino garoonka dhexdiisa.
“Waxaan heysanaa ciyaartooy dhallinyaro ah iyo kuwo khabiirro ah. Marka aad eegto khabiiradeena waa sida Patrice Evra iyo goolhaye Huge Lloris.. Halka aan heysano ciyaartoy dhallinyar sida Kingsley Coman, Anthony Martial iyo Paul Pogba. Sidaas darteed France waxay heysataa koox wanaagsan oo u qaadi karta tartankaan.”
Faransiiska ayaa Koobka Qaramada Qaaradda Yurub qaaday laba jeer waana sannadihii 1984 iyo 2000.